Qurutob-n’i Tajikistan: ‘Sakafo Ho An’ny Mahantra’? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2016 5:43 GMT
Qurutob, soratana koa hoe Kurutob. Creative commons.
Vetivety ny qurutob, izay sakafo nentim-paharazana nalaza tao Tajikistan, firenena any atsimon'ny firaisana Sovietika fahiny, dia nahasintona ireo faritra hafa tao amin'ny firenena tato anatin'ny taona vitsivitsy, miaraka amin'ny mpikambana sasany ao amin'ny kilasin'ireo Tajik be resaka hatrany am-pahaterahany sy lehibe tany avaratra ary mampifandray izany zava-misy izany amin'ny krizy ara-kolontsaina sy ara-toekarena lalina ao amin'ny repoblika.
Inona ny qurutob?
Tsy voatery ho mpanankarena ianao raha hanamboatra qurutob tsotra, ary ara-tantara, tsy noheverina ho an'ny latabatry ny sangany ao amin'ny Repoblikan'i Azia Afovoany izany sakafo izany. Ny fomba fahandro mahazatra dia ronono kapohina ao anaty lovia jobo miaraka amin'ny sira sy rano ary araraka amin'ny mofo efa nopotipotehina sy tongolo masaka tsara.
Ireo izay manana kokoa avy eo afaka manampy legioma, voatabia, ary na hena koa aza, na dia ara-tantara, ny fomba fahandro azy dia legioma tsy fahita firy ao amin'ny tempolin'ny fomba fahandro Tajik.
Ity rakitsary maharitra minitra ora ity dia mampiseho aminao ny fomba fikarakarana qurutob:
“Fianakaviana mahantra”n'ireo any avaratra no anty atsimon'i Tajikistan
Ara-tantara, na be mponina aza ny any atsimon'i Tajikistan, dia toerana very ara-politika sy ara-toekarena; zara raha velona, tsy norarahian'ireo tompon'ny fanapahan-kevitra tamin'ny lafiny maro tao amin'ny Emirà Boukhara, ny Fanjakana Rosiana ary ny Firaisana Sovietika tamin'ny làlana nizoran'ny firenena ho any amin'ny fahaleovantena tamin'ny 1991.
Somary niova izany toe-draharaha izany tamin'ny 1992, fony napetrak'i Rosia sy Uzbekistan, roa amin'ireo tena mpanohana ny governemanta nandritra ny ady an-trano nangidy izay nafotaka tany Tajikistan nandritra ny taona 1990, ny lanjany tao ambadik'i Emmomaly Rakhmon teraka tany atsimo.
24 taona taty aoriana, tsy filoha lefitry ny firenena intsony Rakhmon, fa “Mpanorina ny Firaisan'ny Fandriampahalemana Nasionaly, Mpitarika ny Firenena”, izay nekena ara-dalàna ny havany akaiky sy ireo akaiky azy avy any atsimo hitàna ireo toerana ambony tao amin'ny governemantan'i Tajikistan.
Vokatr'izany, raha vao nifamatotra akaiky tamin'ny mponina miteny Tajik any amin'ny tanàna avaratra toa an'i Khujand, izay ambohipihaonan'ireo sangany tao amin'ny firenena nandritra ny vanimpotoana Sovietika, ary ireo tanàna miteny Tajik amin'ny Làlan'ny Lamba Landy, Bukhara sy Samarkand (miorina any Uzbekistan vaovao) ny hevitry ny fitondrana Tajik, dia manana anjara goavana amin'ny fampielezankevitry ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny fomba fahandro tatsimo, ny mozika sy ny dihy.
Inona no azo raisina amin'ny qurutob amin'izao fotoana izao?
Tato anatin'ny taona vitsy, tsapa ho niakatra avo be ny trano fisakafoanana manolotra qurutob (qurutobkhona amin'ny teny Tajik) tao Dushanbe renivohitra, ary tsy mihoatra ny 2 – 3 Dolara ny vidin'ny sakafo qurutob.
Niteraka resabe tampotampoka tamin'ny aterineto izany.
Aziz Karim, Tajik mpanao gazety, mamaritra ny qurutobkhona ho toy ny “fitaratra iray” ho an'ny firenena izay manana toekarena niady mafy tamin'ny fitontonganana tany Rosia, ahitana mpiasa mpifindra monina mihoatra ny iray tapitrisa miasa mafy.
Amin'ity indray mitoraka ity aho dia tsy hiresaka ny antony nahatonga ny sasany amin'ny mpiray tanindrazana aminay nanonofy loviana qurutob fotsiny ary mirehareha amin'izany sakafo izany sy ny loviany hazo. Tsy hiresaka momba ity lovia hazo ity koa aho, izay tsy tokony hahazo toerana any amin'ireo toeram-pisakafoanana sy trano fihinanana ao an-tanàna satria tsy ara-pahasalamana izany. Ny olako dia nahoana ny isan'ny qurutobkhonas no niakatra ao Dushanbe? […]
Tsy eritreretinao ve fa ny fahantrana sy ny rarin-tsaina ara-bola no antony? Raha 3 – 5 Dolara ny sakafo tsotra any aminà trano fisakafoanana tsotra, afaka mameno ny kiraronao ianao aminà 1.50 Dolara fotsiny any amin'ny qurutobkhona iray.
Na izany aza, tsy miombon-kevitra amin'io ilay Tajik malaza mpanao gazety tsy miankina, Rajab Mirzo :
Tsy misy qurutob tena izy any Dushanbe. Tsy ny olona rehetra no mahatakatra ny qurutob tena izy, satria tena somary lafo izany. Tsy rariny tsotra izao ny milaza fa sakafo ho an'ny mahantra ny qurutob .
Rustam Abduqodir, Tajik mpanoratra izay niaina tany Kyrgyzstan hatramin'ny nipoahan'ny ady an-trano Tajik nandritra ny dimy taona izay nifarana tamin'ny 1997, nanisaka ny fifanakalozan-kevitra hiala amin'ny toekarena ho amin'ny kolontsaina.
Na ho apetraka an-jorony aza ny resaka toekarena, ny fiakaran'ny qurutobkhonas dia midika ho fanindrian'ny kolontsaina avy any ambanivohitra ny kolontsaina an-drenivohitra ary araka izany dia mariky ny fijotsoana izany.
Ny sasany amin'ny fanairana momba ny qurutob dia mety azo hazavaina amin'ny alalan'ny fieboeboan'ny tavaratra sy ny tahotra lalandava. Resaka natavezina koa izany. Raha mitombo ny fiantraikan'ny qurutob, palav (plov sy pilau koa ), ny hena be menaka, vary sy karaoty, sakafo malaza manerana an'i Azia Afovoany, dia mbola sakafo izay andrandrain'ny ankamaroan'ny olona.
Afangaro amin'ny dite mafana iray baolina, mbola manjaka amin'ny fampakaram-bady any Tajikistan sy Uzbekistan ny palav, ary mbola mitoetra ho teboka iraisana indrindra amin'ny fidirana amin'ny faritry ny fahaizana mandray olona ho an'ny vahiny avy any ivelany. Amin'izay heviny izay ny qurutob, dia nijanona amin'ny ‘maha-havana mahatra’ azy, na nisy fikarohana momba ny bitsika mifandraika amin'ny qurutob aza mampiseho vahiny maro ao Dushanbe miha-mahafantatra ilay sakafo.
Ho fiarovana ny fihinanana anaty lovia iraisana
Ankoatry ny fifanakalozan-kevitra momba ny toekarena sy ny kolontsaina, ny korontana momba ny qurutob tsotra tato ho ato dia niteraka fanontaniana mivelatra kokoa momba ny fahazarana misakafo any Azia Afovoany.
Vao haingana ilay mpampiasa Facebook, Mirzoi Hojimuhammad, no niaro ny kolontsaina momba ny fihinanana aminà lovia iraisana, ohatra
Tsy anay ny kolontsaina mihinana amin'ny lovia samy hafa ary tsy misy na inona na inona tokony hireharehana amin'izany. Ny olona tendan-kanina no manao izany. Ny kolontsaina Silamo dia raha mbola azo atao dia mihinana amin'ny lovia iray ny olona maro. Omenay lovia mitokana ireo ankizy izay tsy mbola nianatra ny fitsipiky ny fisakafoanana.
Tsy mbola nisy nanaporofo fa mahazo aretina ianao rehefa mihinana amin'ny tànana na rehefa mihinana amin'ny lovia iray iarahana amin'ny olona maro. Raha maloto ny olona iray, mety ho tratry ny aretim-pivalanana izy na mihinana amin'ny sotro volamena na mihinana amin'ny lovia volafotsy.
Na inona na inona siansa momba ny fihinanana amin'ny lovia iraisana, ny olana ao Tajikistan dia ny fahadiovana. Ny aretim-pivalanana dia voatanisa ho ao anatin'ny antony enina voalohany nahatonga fahafatesana tany Tajikistan tamin'ny taona 2012., araka ny OMS, nahitana ny 3.7% ny fahafatesana. Fanampiana iraisam-pirenena lehibe miavaka no natokana ho an'izany olana izany mba hanorenana trano fivoahana maromaro kokoa, hanomezana rano madio ho an'ny mponina, ary hampahafantaraa ny olona ny maha-zava-dehibe ny fanasàny ny tànan'izy ireo amin'ny savony. .